Qaramada Midoobay oo taageertay shirka madaxda maamuladda
Wadatashigaan ayaa loo muddeeyay in uu 9-kan bishaan July ka dhaco magaalada Dhuusamareeb.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ku leedahay magaaladda Muqdisho ayaa soo dhaweeyay kulanka la qorsheeyay in ay Dhuusamareeb ku yeeshaan madaxda maamuladda dalka.
War qoraal ah oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee UNSOM ayaa lagu sheegay in shir-madaxeedkaas uu muhiim u yahay wadahadalada la filayo in ay yeeshaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubinta ka ah.
Wadaxaajoodyadda maamulada iyo dowladda federaalka ayaa looga doodayaa ajendeyaasha hor-tabinta u leh qaranka oo ay kamid yihiin doorashooyinka, ammaanka iyo dib u eegista dastuurka qabyadda ah.
Bayaanka kooban ayaa lagu sheegay in ergayga UN-ka, James Swan, uu ku faraxsan yahay in kulamadii u dambeeyay ee xisbiyadda iyo ururada bulshadda qabsadeen asbuucaan lagu gorfeeyay doorashadda.
"Wadatashiyo loo dhan yahay waxaa muhiim ka ah inta uusan baarlamaanka ka doodin soo jeedintii guddiga doorashooyinka iyo go'aanadda sidda loo dhaqan-gelinayo sharciga doorashadda," ayaa lagu soo xiray.
Shirka ay maamulada ku yeelanayaan Dhuusamareeb 9-ka bishaan Julaayo oo ku beegan Khamiista soo aadan ayaa ka dambeeyay markii uu qabsoomi waayey shirkii uu Farmaajo u muddeeyay in uu Muqdisho ka dhaco.
Baaqashadaas ayaa ka dambeysay ka gedaal markii madaxtooyadda ku fashilantay in ay fuliso is-afgaradyaddii dowlad goboleedyadda la gashay ee ku aadanaa in la hakiyo xeerarka lagu muran-san yahay ee doorashooyinka.
Kulanka Dhuusamareeb oo isha lagu waddayo hayo waxaa laga yaabaa in uu qeybaha dambe kaga biiro ra'iisul wasaare Khayre xilli afhayeenka Aqalka Hoose oo la casuumay, balse aan la martiqaadin gudoonka Aqalka Hoose.
Isqabqabsi ka dhashay Jaamacad ay DF ku diiwaan-gelisay astaanta UN-ka
Soomaliya 19.05.2020. 11:45
Ra'iisul wasaaraha dowladdii ku meelgaarka, Cali Maxamed Geedi, ayaa iska leh xaruntan, sidda baaritaan lagu ogaadey.
DF oo saxiixdey heshiis loogu deeqay laba milyan oo Yuuroo
Soomaliya 12.03.2020. 17:42
DF iyo Qaramada Midoobay oo kulan ku yeeshay Muqdisho
Soomaliya 11.03.2020. 19:00
Muxuu yahay walwalka cusub ee soo foodsaarey Fahad Yaasiin Daahir?
Soomaliya 11.06.2020. 09:52
UN-ka oo ka hadlay socdaalka la filayo in uu Deni ku tago Muqdisho
Puntland 21.03.2020. 17:50